“ficil ayey asxaabta Rasuulku CSW ugu hiilin jireen.” Sheekh Dirir | Berberanews.com
Home WARARKA “ficil ayey asxaabta Rasuulku CSW ugu hiilin jireen.” Sheekh Dirir
“Hadii Gaalada & Saxaafadoodu isku raaceen in Nabiga CSW wax laga sheego, in laga jawaabo waa xaq iyo waajib.” Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir.
Hargeysa- (Berberanews)-Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir ayaa sheegay hadii Gaalada iyo saxaafadoodu isku raaceen in Nabiga CSW wax laga sheego, in laga jawaabo waa xaq iyo waajib, waxaanay ka turjumaysaa jacaylka aynu Nabiga CSW u qabno, iimaankeena iyo inuu innagu weyn yahay.
“Hadii gaalada iyo saxaafadoodu isku raaceen in Nabiga CSW wax laga sheego, in laga jawaabo waa xaq iyo waajib. Waxaanay ka turjumaysaa jacaylka aynu Nabiga CSW u qabno, iimaankeena iyo inuu innagu weyn yahay. Cidda kugu weyn marka meel lagaga dhaco isma hannatid, oo fadhiga ma qabatid? Waxaynu ognahay manta qofka meel lagaga dhaco ee saxaafada laga caayo ama qabiilka wax laga sheego ama wadamada caalamka midkood wax laga sheego, adduunyadu way istaagtaa, oo qoladaasi muddo ayey hadlaan? Markaa dadku hadday ka aamusaan arrinka Nabi Maxamed CSW iyo u hiilintiisa, waanu ku weynayn ayey ka dhigan tahay, kama xanuunsatid waxaan kugu weynayn?
Sheekh Maxamed oo sharaxaad ka bixinayey sida saxaabadii Nabi Maxamed CSW ugu difaaci jireen hadal iyo ficil labadaba ayaa yidhi, mar gaaladii Nabiga CSW gabay ku soo caayeen oo diinta Ilaahay SW wax ka sheegeen ayuu Nabigu CSw gabyaagii u yeedhay oo Kacab ibnu maalik yidhi nimankan u jawaab, wuu u jawaabay Nabigu CSw kuma qancin, waxuu u yeedhay gabyaagiisi labaad Cabdillaahi ibnu rawaaxa, wuu u jawaabay, balse halkeedii muu dhigin. Xasaan binu saabit ayuu Nabigu CSW u yeedhay, gabay cajiib ah ayuu gaaladii u jeediyey, Nabiguna CSW waxuu ugu duceeyey in Ilaahay SW ugu hiiliyo Ruuxul-Qudus.
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo maamuus qaran guddoonsiiyay Duuliye Axmed-dheere
Next articleJilayaasha Sooraan iyo Jawaan oo khudbado ka jeediyay madashii abaalmarinta Axmed-dheere